Saturday April 04, 2020 - 11:54:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 3.7/5 Stars) Total Votes: 3
Waxa beryahan ay Khayre iyo xukuumaddiisu ay warbaahinta ka sheegayeen in Soomaaliya deyntii lagu lahaa laga bixiyey. Hadda waa sidee qaabka deynta loo cafiyey iyo qaabka ay Khayre iyo xukuumaddiisu ay warbaahinta uga sheegeen? Soomaaliya waxa lagu l
Waxa beryahan ay Khayre iyo xukuumaddiisu ay warbaahinta ka sheegayeen in Soomaaliya deyntii lagu lahaa laga bixiyey. Hadda waa sidee qaabka deynta loo cafiyey iyo qaabka ay Khayre iyo xukuumaddiisu ay warbaahinta uga sheegeen? Soomaaliya waxa lagu lahaa deyn dhan 2.4 bilyan oo doollarka Maraykanka ah sannadkii 1987kii xilligaas oo ay dalka ka arriminaysay dawladdii kacaanka. Daynta hadda Soomaaliyalagu leeyahay ayaa dhan 5.2 bilyan oo doollarka Maraykanka ah.
Lacagahaas waxa iska lahaa hay’adda maaliyadda ee dunida sida Hay’adda Maaliyadda Dunida (IMF) Bankgiga Adduunka (World Bank), Bangiga Horumarinta ee Afrika (African Development Bank) iyo dalal ay ka mid yihiin Maraykanka Talyaaniga iyo qaybo ka mid ah dalalka Carab.
Hadda daynta ay sheegeen Khayre iyo xukuumaddiisu in laga cafiyey waxa weeye mid qaab maamul ah (administration process) lagagana khafiifiyey daymahaas oo lagu soo reebay 557 malyuun oo doollarka Maraykanka ah, taas oo laga kafiifiyey 37 dal oo ay Soomaaliya ku jirto, ahna dawlado guuldarreystay awoodina waayey in ay daymahaa lagu leeyahay bixiyaan, mas’uuliyad darro jirta. In dayn la cafiyo waxa ku xiran shuruudo sagaal (9) ah oo uu ka mid yahay waxa la yiraahdo in ay dawladdu haysato kayd lacageed oo u ay ku bixin karto daynta ay qaadan karto (solvency), taasna ma aha mid ay awooddo Dawladda hadda jirtaa.
Barnaamijyada dayn cafintuna ma aha mid ku xiran oo keliya in dibadaha la wareego balse waa mid salka ku haysa barnaamij dhammaystiran (package), kaas oo salka ku haya hawlaha ka la duwan ee dawladda u yaalla, oo ay ka mid yihiin, arrimaha siyaasadda, amniga, dawlad wanaagga iyo weliba baahinta awoodda dawladda ee qaybaha ka la duwan ee ku bahoobay dawladda Federaalka ah iyo weliba waxa loo yaqaan dhawrista xuquuqda insaanka, hawlahaasna mid keliya gacanta ku ma hayaan, mana buuxin karaan ama u ma eka kuwo fahansan.
Ma jirto wax dayn ah oo ay qaadan karaan ama ay dalban karaan iyaga oo aan buuxin shuruudaha sagaalka ah oo ku cad qoraalkii ay isla gaareen iyaga iyo hay’adaha khafiifiyey daymaha Soomaaliya lagu leeyahay. Waxa hadda lacag ahaan loo siiyey saddexdii sano ee ugu dambaysay lacag dhan 395 malyan si loo kaalmeeyo dhismaha hay’adaha maaliyadda. Qoraalka ay ummada sida khaldan ugu turjumayaan ayaaba xaddidaya daymaha ay qaadan karaan oo xataa xaddidaya daymaha ay gudaha ka qaadan karaan oo ay weydiisan karaan hay’adaha miisaaniyadda ee ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed.
Ugu dambayntii waxa hadda jira ee la sheegi karaa waxa weeye in la oggolaaday in daymaha laga cafin karo haddii ay shuruudaha sagaalka (9) ah ay fuliso muddo ku siman 3da sano ee soo socota oo ay ka mid atahay bxixinta 557 malyuun oo doolarka Maraykanka ah lagana soo reebay deyntii dhammayd 5.2 bilyan oo doollarka Maraykanka ahayd ee Soomaaliya lagu lahaa.
W/Q Suldaan Garyare
Maleeshiyaadka Xaftar oo laga qabsaday magaalooyin katirsan Liibiya.
Maleeshiyaadka Khaliifa Xaftar oo lagala wareegay saldhig muhiim ah.